ခြှေးနှဲစာနဲ့ စုထားတဲ့ ပိုကျဆံလေးတှအေလိမျခံလိုကျရတဲ့ အေးသီတာ – စှယျစုံသုတ
မွနျမာဇာတျကားတှထေဲမှာမငျးသားမငျးသမီးတှနေဲ့တငျ ဇာတျလမျးတဈခုကမပွညျ့စုံဘဲဇာတျပို့ဇာတျရံတှကွေောငျ့လညျး ဇာတျလမျးကောငျးတဈပုဒျဖွဈလာပါတယျနျော..
ဇာတျပို့သရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ေ အးသီတာကတော့ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးမှာပီပွငျစှာသရုပျဆောငျနိုငျပွီးဘကျစုံတျောတဲ့ဇာတျပို့ ကောငျးတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ သူမကစိတျသဘောထားလညျး ဖွူစငျတာကွောငျ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေလညျး ခဈြခငျရသူလညျး ဖွဈပါတယျ.
မကွာသေးခငျကာလမှာတော့ သူမက ကလေးလေးတဈယောကျကိုမှေးစားခငျြလို့အိမျချေါထားပါတယျဆိုပွီးတငျလာပါသေးတယျ။ကိုဗဈကာလမှာရိုတျကှငျးတှနေားထားတာကွောငျ့အေးသီတာကတော့ဟငျးခကျြပွီးစြေးရောငျးနတော လညျးဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ ပို့ဈအောကျမှာတော့ သူမကို အားပေးစကားတှေ ပွောထားကွပါသေးတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး အားပေးစကားလေး ပွောပေးသှားကွပါအုံးနျော..
Source: Aye Thida
ချွေးနှဲစာနဲ့ စုထားတဲ့ ပိုက်ဆံလေးတွေအလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ အေးသီတာ
မြန်မာဇာတ်ကားတွေထဲမှာမင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့တင် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကမပြည့်စုံဘဲဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေကြောင့်လည်း ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာပါတယ်နော်..
ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ေ အးသီတာကတော့ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးဘက်စုံတော်တဲ့ဇာတ်ပို့ကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမကစိတ်သဘောထားလည်း ဖြူစင်တာကြောင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကလည်း ချစ်ခင်ရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်.
မကြာသေးခင်ကာလမှာတော့ သူမက ကလေးလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးစားချင်လို့အိမ်ခေါ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတင်လာပါသေးတယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာရိုတ်ကွင်းတွေနားထားတာကြောင့်အေးသီတာကတော့ဟင်းချက်ပြီးဈေးရောင်းနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ပို့စ်အောက်မှာတော့ သူမကို အားပေးစကားတွေ ပြောထားကြပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း အားပေးစကားလေး ပြောပေးသွားကြပါအုံးနော်..
သူ့နာမညျသုံးပွီး ငှလေိမျခံနရေတာတှေ ပွနျကွားရလို့ စိတျမကောငျးကွီးစှာဖွဈနရေတဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ